MAHAJANGA : Ireo manampahefana no mifanohantohan-tsy ho lavo ho fampandrosoana ny tanàna
Mifanohana sy mifanotrona hatrany ireo telo lahy mpitantana ny tanànan’i Mahajanga, dia ny Préfet Ravelomahay Lahiniaina, ny Lehiben’ny Faritra Saïd Ahamad Jaffar ary ny Ben’ny tanànan’i Mahajanga, Andriantomanga Mokhtar. 6 avril 2017
Na manana firehana samy hafa aza izy ireo dia miezaka hatrany miara-mitady ny tombontsoan’ny tanàna. Nandritra ireo lanonam-pitokanana, natao ny talata teo dia nifanotrona hatrany izy ireo ary tazan’ny rehetra ny fiaraha-miasa.
Fantatra fa amin’ny maha solontenam-panjakana ny Préfet dia tsy maintsy mandalo ao aminy ny fanapahan-kevitra raisina eny anivon’ny Kaominina.
Raha nilona am-bolana maro izany teo aloha dia malaky mivoaka kosa ankehitriny. Hita matetika ihany koa miara-mitady vahaolana amin’ny Ben’ny tanàna mikasika ireo olana mandalo amin’ny tanàna, Ravelomahay Lahiniaina na i Lalah ka anisan’ireo niezaka nandamina ny olana mikasika ny bajaj izay tsy mety miravona mihitsy eo anivon’ny Kaominina.
Ny alarobia teo koa dia nivory tao amin’ny efitrano fivorian’ny Mpanolotsaina monisipaly ny Ben’ny tanàna sy ireo Mpanolotsaina ary ny Préfet. Tsy nisy nipika ny resaka tao saingy vinaniana ho mikasika ilay fampiatoana ny Ben’ny tanàna amin’ny asany izay nataon’ireo Mpanolotsaina monisipaly. Mbola resabe eto Mahajanga io raharaha io satria anisan’ny antony lehibe voalaza ny hoe ratsy tantana ny Kaominina.
Ireo Mpanolotsaina monisipaly anefa dia anisan’ny manaratsy endrika ny Kaominina amin’ny fangatahana tombontsoa manokana mihoa-pampana satria dia ny ampahatelon’ny tetibolan’ny Kaominina tamin’ny taona lasa iny, izay manodidina ny 8 miliara Ariary, no nangatahin’izy ireo ho azy ireo manokana.
Tsiahivina fa ny karama sy ‘charges sociales’, ny fanadiovana ny tanàna ary ny karaman’ny Telma amin’ny fandoavan-ketra amin’ny finday no anisan’ny tsy maintsy aloa amin’ny tetibola. Ny sisa kosa dia amin’ny fanatsarana sy fotodrafitrasa.
Mbola tsy fantatra aloha ny resaka tao, fa andrasana ny tatitra mikasika izay. Miandry ihany koa ny hiafaranan’io fampiatoana io.